Kuvhuna makumi mashanu emakore etsika, InverPad ndiyo yekutanga tekinoroji yakagadziriswa naAngark. Kuburikidza nekubatanidzwa kwakakwana kwePad dhizaini, Stepless-DC-Inverter uye anti-ruzha tekinoroji, inovandudza ruzivo rwekushambira kusvika padanho idzva.
Nakidzwa Kwechokwadi Kunyarara
Pamamita 1 kure, tarisa manzwi akadzika kunge:
36.5dB (A)Kunyarara Mode
STEPLESS DC INPASI
Stepless DC Inverter inobvumira iyo compressor kugadzirisa iyo kumhanyisa maererano neizvo chaizvo zvinodiwa uye mamiriro. Iyo frequency uye RPM inogona kugadziriswa imwe neimwe kuti ipe zvinoshamisa kuponesa simba mashandiro uye kunyanyisa kunyarara.
InverMax Commerce Inverter Pool Heat Pump 60 / 110kw
Tarisa zviri kuitika nesu!
Thu-Jun-2021 Verenga zvimwe
Fri-May-2021 Verenga zvimwe
Mon-Mar-2021 Verenga zvimwe
“Takawedzera kutengesa kwepombi yedu yekupisa ne3 nekuda kweVa Nyarara. Kana vatengi vachiona pachinhu chedu chekuratidzira, ivo vanofarira neyemukati yakanakisa aluminium casing. Ipapo ivo vanongofanira kuzvinzwa zvichishanduka kuti vagutsikane kuti ndicho chigadzirwa chikuru. Isu tiri ...
"Vagari vekuHungary Kerex vatengi uye vatengi vane Tatova Nyaradzo vanoyemura maitiro ayo akasiyana. Inotaridzika chaizvo seamplifier muholo yemakonzati! Chii chinoshamisa uye chakasiyana chigadzirwa kubva kune vakwikwidzi ndiko kunyanyisa kunyarara kushanda ...